01/02/2018 - Page 2 sur 4 -
Ambohimena Antsirabe : Ramatoa iray maty voatifitry ny jiolahy
Mitaintain-dava ny mponina, izay no azo amehezana ny tranga miseho eto Antsirabe tato ho ato izay. Mahazo laka loatra mantsy ny tsy fandriam-pahalemana hatramin’ny niandohan’ny ity taona vaovao ity. Ankoatra izay, dia mbola tsy nahenoana …Tohiny
Ady amin’ny vohoka aloha loatra : Hampidirina anaty fandaharam-pianarana ny fahasalamana ara-pananahana
Ny 20 isan-jaton’ny ankizivavy 15 hatramin’ny 19 taona dia efa tafiditra ao anatin’ny sehatra fanaovana firaisana ara-nofo. Fantatra anefa fa ny 18 isan-jato amin’io 20 isan-jato io indray dia tsy manao fandrindram-piterahana. Eto Madagasikara ihany …Tohiny
Filankevitry ny governemanta manokana : Nodinihina ny mikasika ny lalàm-pifidianana
Ankoatra ny filankevitry ny govenemanta izay notanterahina afak’omaly dia nisy ihany koa ny filankevitry ny governemanta manokana izay notontosaina omaly, ary nandinihana manokana ny mikasika ny lalàm-pifidianana. Tsiahivina fa ny taona 2017 no efa voavolavola …Tohiny
Fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra : Hisokatra anio ny lalana eny Ambatoroka
Mahakasika ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo, dia fantatra fa efa nisokatra nanomboka ny alatsinainy teo ny fifamoivoizana eo amin’ny ampahan-dalana izay natao “béton” eo Akorondrano manoloana ny orinasa Henri Fraise. Hisokatra anio kosa ny fifamoivoizana …Tohiny